Bible Mu Nsɛm Nsaano Nkyerɛwee wɔ Fasu Ho - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
DƐN na ɛrekɔ so wɔ ha? Nnipa a wɔwɔ ha no reto pon kɛse. Babilon hene afrɛfrɛ nnipa apem a wɔyɛ atitiriw. Wɔrenom sika ne dwetɛ nkuruwa a wɔfa fii Yehowa asɔrefi hɔ wɔ Yerusalem no mu. Nanso mpofirim ara onipa nsa puei na efii ase kyerɛw fasu no ho. Ehu kaa obiara.
Ná Nebukadnesar banana Belsasar na ɔredi hene. Ɔteɛɛm frɛe sɛ wɔmfa ne mmarima a wonim nyansa no mmra. Ɔhene no kae sɛ: ‘Obiara a obetumi akenkan nkyerɛwee yi na wakyerɛ me ase no, mɛkyɛ no nneɛma pii, na mayɛ no sodifo titiriw a ɔto so abiɛsa wɔ ahemman no mu.’ Nanso anyansafo no mu biara antumi ankenkan nkyerɛwee a ɛwɔ fasu no ho no, na wɔantumi ankyerɛ ase.
Ɔhene maame tee nnyigyei no na ɔbaa baabi a wɔredidi no. Ɔka kyerɛɛ ɔhene no sɛ: ‘Nsuro. Ɔbarima bi wɔ w’ahemman yi mu a onim anyame kronkron no. Bere a wo nana Nebukadnesar yɛ ɔhene no, ɔde no sii anyansafo no nyinaa so panyin. Wɔfrɛ no Daniel. Ma wɔnkɔfrɛ no, na ɔbɛka nea eyi kyerɛ nyinaa akyerɛ wo.’
Enti ntɛm ara wɔkɔfaa Daniel bae. Bere a ɔkae sɛ ɔrennye akyɛde biara no, Daniel fii ase kaa nea enti a bere bi a atwam no Yehowa yii Belsasar nana Nebukadnesar fii ahenni no so ho asɛm. Daniel kae sɛ: ‘Ná ɔyɛ ahantan kɛse. Na Yehowa twee n’aso.’
Daniel ka kyerɛɛ Belsasar sɛ: ‘Na wo, Belsasar, wunim nea ɛbaa no so nyinaa, nanso wo nso woyɛ ahantan te sɛ Nebukadnesar. Wode Yehowa asɔrefi nkuruwa aba na worenom mu. Wode ayeyi ama anyame a wɔde nnua ne abo ayɛ, na wonhyɛɛ Ɔbɔadeɛ Kɛse no anuonyam. Ɛno nti na Onyankopɔn ama nsa no abɛkyerɛw saa asɛm yi.
Daniel kae sɛ: ‘Nkyerɛwee no ni: MENE, MENE, TEKEL ne PARSIN.’
‘MENE kyerɛ sɛ Onyankopɔn akan w’ahenni no nna de aba awiei. TEKEL kyerɛ sɛ wɔakari wo wɔ nsenia mu ahu sɛ womfata. PARSIN kyerɛ sɛ wɔde w’ahenni no ama Mediafo ne Persiafo.’
Bere a Daniel gu so rekasa mpo no, na Mediafo ne Persiafo ato ahyɛ Babilon so. Wɔfaa kurow no na wokum Belsasar. Nsaano nkyerɛwee a ɛwɔ fasu no ho no baa mu anadwo no ara! Nanso dɛn na na ɛbɛba Israelfo no so afei? Ɛrenkyɛ yebehu, nanso nea edi kan no ma yɛnhwɛ nea ɛbaa Daniel so.
Dɛn na esii bere a Babilon hene tow pon kɛse na ɔnom nkuruwa a wɔfa fii Yehowa asɔrefi hɔ wɔ Yerusalem no mu no?
Dɛn na Belsasar ka kyerɛɛ ne mmarima a wonim nyansa no, nanso dɛn na wɔantumi anyɛ?
Dɛn na ɔhene no maame ka kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ?
Adɛn nti na Onyankopɔn somaa nsa sɛ ɛmmɛkyerɛw fasu no ho, sɛnea Daniel ka kyerɛɛ ɔhene no?
Ɔkwan bɛn so na Daniel kyerɛkyerɛɛ nkyerɛwee a ɛwɔ fasu no ho no ase?
Dɛn na esii bere a Daniel gu so rekasa no?
Kenkan Daniel 5:1-31.
Fa Onyankopɔn ho suro toto ehu a ɛkaa Belsasar bere a ohuu nkyerɛwee wɔ fasu ho no ho. (Dan. 5:6, 7; Dw. 19:9; Rom. 8:35-39)
Ɔkwan bɛn so na Daniel daa akokoduru kɛse adi bere a ɔrekasa akyerɛ Belsasar ne n’abirɛmpɔn no? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Aso. 4:29)
Ɔkwan bɛn so na Daniel ti 5 si Yehowa amansan tumidi so dua? (Dan. 4:17, 25; 5:21)